"Ihe ụtọ nke Seychelles" na-eme ememme mbụ ya na ndị mmekọ UAE
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » "Ihe ụtọ nke Seychelles" na-eme ememe nnọkọ mbụ na ndị mmekọ UAE
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE
"Ihe ụtọ nke Seychelles" na-eme ememe nnọkọ mbụ na ndị mmekọ UAE
Ọdịiche nke Seychelles
N'oge nnọkọ mbụ nke Mazi Sylvestre Radegonde, Minista nke mba ofesi na njem nlegharị anya nke Seychelles, ya na ndị mmekọ njem nlegharị anya Middle East, Office Tourism Seychelles kwadoro mmemme "Taste of Seychelles" na Jumeirah Emirates Towers na mgbede Tuesday. , Ọktoba 26.
Ihe omume ahụ gụnyere ndị nwere mmetụta na ndị isi azụmaahịa sitere na UAE, yana mgbasa ozi mgbasa ozi na moguls, na ndị mmekọ ahia.
Akpọrọ ndị ọbịa gaa njem na-atọ ụtọ na nri ụtọ dị ka aki oyibo, ibe banana na ihe ọṅụṅụ mpaghara.
Ka mmachi njem na-amalite ịdị mfe na mba Arab niile, ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe ike ịhụ n'onwe ha akụkụ akụ na ụba nke Seychelles.
N'akụkụ Mịnịsta na-ahụ maka mba ofesi na njem nlegharị anya, ndị nnọchi anya gọọmentị ndị ọzọ si Seychelles bịara mmemme ahụ. Onye minista na-ahụ maka ndị ntorobịa, egwuregwu na ezinụlọ, Marie-Celine Zialor; Onye minista a họpụtara ahọpụta na onye minista na-ahụ maka ịkụ azụ, Jean François Ferrari; Onye isi obodo Victoria, David Andre; na ndị isi ọchịchị ndị ọzọ ama ama si ndị Seychelles sonyeere Minista Radegonde n'ịnabata ndị ọbịa ahụ, bụ ndị gụnyere ọtụtụ ndị nwere mmetụta na ndị isi azụmahịa sitere na United Arab Emirates, yana mgbasa ozi mgbasa ozi dị iche iche, ndị mgbasa ozi mgbasa ozi, na ndị mmekọ ahia, na ihe omume na-egbuke egbuke.
Onye Minista na-esokwa onye ozi a na onye isi ode akwụkwọ na-ahụ maka njem nlegharị anya, Sherin Francis, na onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịre ahịa ebe, Bernadette Willemin, ha abụọ nọ ebe ahụ ịnabata ndị ọbịa ahụ.
N'ime mgbede ahụ dị egwu na ọkaibe, nke mere tupu ụbọchị mba Seychelles na Expo 2020 Dubai, a kpọgara ndị ọbịa ahụ na njem ịchọpụta ụtọ nke Seychelles, ebe a na-enye nri dị ka aki oyibo, ibe banana na ihe ọṅụṅụ mpaghara. mgbe onye Seychelles na-agụ egwú bụ Isham Rath na onye ọkpụkpọ Saxophone Jean Quatre, ndị Seychellois ama ama na-ese ihe.
N’okwu ya, Minista Radegonde kwuru, sị: “Ebe nke a bụ nleta mbụ m na Middle East n’ikike m dị ka onye na-ahụ maka njem nlegharị anya, ọ ga-amasị m ikele ndị United Arab Emirates maka ọbịa ọbịa ha na-enweghị atụ. Mmekọrịta anyị na United Arab Emirates adịla nso na ọpụrụiche. Ebe ọ bụ na njikọ anyị na mpaghara ahụ malitere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ gara aga, UAE abụrụla mba mbụ na Middle East na-eleta agwaetiti anyị afọ iri n'usoro. "
N’ịtụle mmetụta ọrịa a na-enwe n’àgwàetiti ndị ahụ, Maazị Radegonde kwuru, sị: “Anyị anọwo na-arụsi ọrụ ike n’ime ihe ndị dị mkpa n’imejuputa ihe ndị chọrọ njem kwesịrị ekwesị ka anyị wee nwee ike ichebe ma ụmụ amaala anyị na ndị ọbịa. Obi dị m ụtọ na ịrụsi ọrụ ike anyị rụpụtara arụpụta ihe. Ugbu a, ihe dịka 72% nke ndị bi na anyị agbaala ọgwụ mgbochi zuru oke. Site na nke a, anyị nwere ike kwuwapụta Seychelles ugbu a dị ka obodo nchekwa maka ndị njem nlegharị anya. "
Na-ekwu maka ihe omume ahụ, Ahmed Fathallah, Njem nlegharị anya Seychelles Onye nnọchi anya nke dabere na Dubai, kwuru, sị: “Obi dị anyị ụtọ na ntinye nke mmemme a. Ọ ga-amasị anyị ikele ndị ọbịa anyị a na-akwanyere ùgwù maka ime ya ebe a taa na maka ịbata Minista Radegonde na ọbịbịa mbụ ya dị ka onye nlekọta njem nleta na Middle East. Ka mmachi njem na-amalite ịdị mfe na mba Arab niile, anyị nwere olile anya na ọtụtụ mmadụ na-enwe ike ịhụ n'onwe ha akụkụ dị iche iche na nke ọdịbendị Seychelles. "
Avant-goût nke ahụmahụ Seychelles dị maka ndị na-eleta pavilion nke agwaetiti-mba na EXPO 2020, Oriakụ Francis kwuru, "Nye ndị nwere mmasị ịhụ onwe ha 'Taste of Seychelles' ebe a na Dubai, anyị bụ obi dị m ụtọ ịgwa ha na ha nwere ike ime nke ahụ nke ọma ugbu a na pavilion Seychelles dị na EXPO. "
N'okpuru okwu 'Conserving Nature', Seychelles na-eji ikpo okwu ha dị elu na EXPO 2020 Dubai pụta ìhè mbọ ndị obodo na mba ụwa gbara iji chebe akụ sitere n'okike nke Seychelles site na idobe gburugburu ebe obibi na ụdị dị iche iche nke agwaetiti mara mma.
"Ọ bụ ihe obi ụtọ ịkpọga onye ọbịa UAE na njem a mara mma ka àgwàetiti anyị na-atọ ụtọ. Ọ bụ oge kwesịrị ekwesị maka ndị otu njem Seychelles ka ha na ndị mmekọ ụlọ ọrụ anyị na-akpakọrịta, "Bernadette Willemin kwuru.
Ebe ndị ọbịa 18,000 dekọrọ site na UAE kemgbe Jenụwarị 2021, obodo ahụ bụ ahịa isi mmalite nke abụọ maka Seychelles.